काभ्रे जिल्लालाई खेलमय बनाउने जिम्मेवारी म पुरा गर्ने छु - सहकार्य मिडिया सहकार्य मिडिया अन्तर्वाता
काभ्रे जिल्लालाई खेलमय बनाउने जिम्मेवारी म पुरा गर्ने छु
१८ आश्विन २०७७, आईतवार १४:१५ Amit Neupane	0 Comments
दैनिकि कसरी बित्दै छ ? कत्तिको बेस्तता छ दैनिकी ?
– लकडाउनले गर्दा फुर्सद नै छ । पदमा बसेको केहि समयमा नै लकडाउन भईदियो । ठुलो योजनाका साथ खेलकुदको नेतृत्व गर्दै गर्दा योजनालाई कार्यान्वयन लकडाउनको कारणले हुन सकेको छैन । जिल्लामा रहेका खेलाडिको जीवनस्तरलाई नै परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी मेरो काधमा आईपुगेको छ । खेलकुद क्षेत्रलाई आगामी दिनलाई कुन दिशातर्फ लग्ने भन्ने योजनामै मेरो दैनिकि वित्ने गरेको छ ।
खेलकुद क्षेत्रमा कसरी आकर्षित हुनुभयो ?
– म सानैदेखि खेलकुदपे्रमी स्वभावको थिए, खेलकुदमा मेरो चासो समेत रहने गर्दथ्यो । स्कुलमा हुँदापनी भलिबल धेरै खेलिन्थ्यो । मैले तेक्वान्दो खेलमा सक्रिय रुपले भाग समेत लिएको थिए । तेक्वान्दो खेलप्रती म निकै आकर्षिण हुन पुगे । मेरो दाई तेक्वान्दोको खेलाडि भएको कारणले गर्दा मलाई घरमा नै सिक्ने र खेल्ने अवसर मिल्यो । त्यस अवस्थामा खेलाडिलाई धेरै महत्व भने दिईदैन थियो । तर, कालान्तरमा मैले नै खेल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएको छु । जिल्ला खेलकुद विकास समिति काभ्रेको अध्यक्षको हैसियतले विगतका दिनमा गरेका सघंर्षलाई सम्झदै आगामी दिनका लागि आउने पुस्ताका खेलप्रेमी दाजुभाई तथा दिदिबहिनीलाई मैले खेल क्षेत्रमा नै भविष्य सुरक्षित बनाउनुनै मेरो योजना हो ।
लकडाउन र कोरोनाले खेलकुद क्षेत्रलाई कस्तो असर पारेको छ ? यसलाई कसरी पहिलाकै अवस्थामा ल्याउने?
– लाकडाउनले खेलकुदलाई मात्र नभएर सम्पुर्ण क्षेत्रमा असर पारेको देखिन्छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने खेलकुदप्रेमी र खेलाडिलाई समेत आफ्नो प्रतिभा देखाउने अवसर मिलेको छैन । यद्यपी, कोरोना एउटा सरुवा रोग भएका कारणले गर्दा यसलाई गलत मानेर यो हाम्रो सत्रु नै सोच्न पर्ने अवस्था भने छैन । किनभने विश्व जगत नै यतिबेला कोरोनाको महामारीमा परेको बेलामा मैले खेल क्षेत्रलाई मात्रै असर परेको छ भन्नु मेरो मुर्खता हुन जान्छ । तर, खेल क्षेत्रलाई अलि धेरै असर भने गर्दछ । किनभने, खेल सधै समुहमा खेलिने गर्दछ र कोरोनाका कारण एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई भेट्न मिल्ने अवस्था समेत रहदैन ।
तपाईं काभ्रे जिल्लाको खेलकुदको अध्यक्ष हुनु भन्दा पहिले र भैसकेपछी के परिवर्तन महसुश गर्नु भएको छ ?
– खेलकुदको जिल्ला अध्यक्ष हुनु भन्दा पहले म समाजिक क्षेत्रमा नै सक्रिय थिए । अहिले अध्यक्ष भएसँगै अर्को समाजिक दायित्व बडेको छ । यसले मलाई नयाँ अनुभवको अवसर मिलेको छ । सानो बेलादेखि नै नेतृत्व गर्ने तहमा रहेर कार्य गरेकाले खेलकुद विकासलाई नेतृत्व गर्न गाह्रो नै हुने अवस्था भने मलाई छैन । तर, पछिल्लो समयमा आफ्नो क्रियशिलता देखाउने अवसर फेरी प्राप्त भएको छ । खेलाडिलाई नेपालमा नै भविष्यको सुनीष्चितता गर्ने अवसर मिलेको छ । यसकारणले गर्दा मैले मेरो जीवनको लक्ष्य नै खेलाडिको भविष्य सुनिष्चीततातर्फ दिएको छु ।
राजनितीमा कतिको आकर्षित हुनुहुन्छ ? पछिल्लो समयको राजनिती ठिक की गलत ?
– राजनीतिमा म नीकै क्रियसिल रहेको छु । लामो समयदेखि राजनीतिक आन्दोलनमा सक्रिय भएको हुनाले मलाई राजनीतिमा चासो समेत रहने गर्दछ । राजनीतिमा आकर्षित नभएको भए आज म यो स्थानमा पनि हुन्न थिए । राजनीति लामो संघर्ष, बलिदानको कथा हो । यँहा देशका लागी कसले कति बलिदान गरे भन्ने कुराको मुल्यांकन हुने गर्दछ । पछिल्लो समयको राजनिती निकै नै गम्भीर मोडमा छ । नेतृत्वले रास्ट्र र जनताप्रती दायित्व बोध नगरेको होकि भन्ने मेरो व्यक्तिगत आशय हो । यो बेलामा लडाई झगडा गरेर छिमेकी हसाउने बेला भने होइन । हामीलाई ईतीहासमा नै पहिलो पटक दुई तिहाई जनताको विश्वास रहेको छ । यस विश्वासलाई हाम्रा नेतृत्वले हाम्रो नीजी स्वार्थ भन्दा माथि रहेर देशका लागि केहि गर्न सकियो भने बल्ल आजको दिनमा राजनीतिको महत्व रहन्छ ।
रोशी गाउँपालिकाको सन्धर्भमा तपाइले गर्नु भएको सहयोग र सहकार्यलाई प्रस्टाईदिनुसन ?
– रोशी गाउँपालिका काभ्रेको नै सुन्दर र संभावना बोकेको गाउँपालिका हो । १३ वटा स्थानीय निकायसँग मेरो सहयोग र सहकार्य हुने गरेको छ । यद्यपी, रोशी गाउँपालिकामा नेकपाको नेतृत्व भने छैन । यो हँुदा हँुदै पनि विकासका कार्य नभएको भने होईन तर, हुन नसकेको केहि कार्यहरुलाई म पालिकाअध्यक्षसँग नै बसेर विना विवाद गर्न आवश्यक कार्यको सल्लाह समेत दिने गरेको छु ।
काभ्रे जिल्लाको खेलाडिहरुको प्रतिनिधि हुनुभएको नताले खेलाडिलाई कसरी प्रोत्साहन गर्नु भएको छ ?
– योजनाहरु धेरै बनाएको छु तर, हाल बन्दाबन्दीको अबस्थामा भएको कारणले खासै योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । आगामी दिनमा बन्दाबन्दी खुलेसँगै खेलाडि अझै विशेषतः काभ्रे जिल्लाका खेलाडिहरुका नीम्ती बनाएका योजनाहरुलाई क्रमागत रुपमा कार्यान्वयनमा लग्दै नयाँ खेलहरुलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने मेरो योजना रहेको छ ।
जिम्मेवारीबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
– सन्तुष्टिको परीभाषा नभएको कारणले गर्दा के कुरालाई सन्तुष्ट मान्ने भन्नु नै सन्तुष्टिको एउटा पाटो भने हो । तर, यति भन्दा भन्दै पनि जिम्मेवारी पाएको छु काभ्रेली जनताको नेतृत्व गर्ने यसलाई मैले मेरो जिम्मेवारी सम्झेको छु र यसै कारणले सन्तुष्ट पनि रहेको छु ।
छोटो समयमा काभ्रेमा नाम चलाउन सफल हुनुभएको छ यसलाई कसरी हेर्नू भएको छ ?
– छोटो समयमा भन्दापनि म निकै लामो समयदेखि नै काभ्रे जिल्लाको राजनीतिमा सक्रिय रहेको छु । २०५६ सालमा तत्कालिन अनेरास्ववियुको जिल्ला सदस्य रहेको थिए । त्यति बेला पनि म जिल्लाका हरेक गाउँमा पुग्ने गरेको थिए । पछिल्लो समयमा आध्ययनको शिलशिलामा जिल्ला बाट काठमाडांैतर्फ स्थानान्तर हुनुपर्यो । काठमाडैंको क्याम्पसमा समेत एक कार्यकाल स्ववियू उप सभापति र अर्को कार्यकाल सभापति समेत रहेर कार्य गरिसकेको थिए । यहि कारणले गर्दा काभ्रेमा अलि कम परिचित भएको महसुस भएको हो ।
खेलाडिहरुले खेलेर मात्रै आफ्नो घर धान्न नसक्ने अवस्थालाई परिवर्तन गर्न के गर्नु पर्ला ?
– खेलाडिहरुले अलि मेहेनत गरी खेलकुदलाई अगाडि बढाउने हो भने सकिन्छ । त्यो तपाईं हाम्रो मात्र प्रयास ले सम्भावना छैन राज्यको तर्फबाट नै विशेष योजनाको आवश्यकता रहेको छ । हामी त अभियान्ता मात्रै हौ । हाम्रो योजना र ऐजेण्डा यहि नै भए पनि राज्यको सहयोग पाईयो भने सफल नहुने भन्ने कुरा पनि रहदैन ।
नेकपाको पछिल्लो समयको गतिविधि ठिक कि बेठिक ?
– नेकपाको गतिविधि भन्दा पनि केन्द्रिय स्तरको नेताहरुको गतिविधि कस्तो छ भन्ने कुराको मुल्यांकन आम जनताले गरिसक्नु भएको छ । म नेकपाको कार्यकर्ता भएको विर्सिने हो भने नेकपाले यतिबेला पदको स्वार्थ र मोहमा परेको जनतासामू छर्लगं देखिएको छ । यसलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।
अत्नमा मिडिया मार्फत के भन्न चाहानुहुन्छ ?
– अन्तमा मेरो आफ्नु बिचारलाई जनता माझ पुर्याउन सहयोग गर्नु हुने तपाईं लगायत तपाईं को सम्पुर्ण टिमलाइ र सहकार्य अनलाइन मिडिया लाई बिशेष धन्यवाद दिन चहान्छु ।
← २४ घण्टामा देशभर २२५३ जना संक्रमित थपिए, सक्रिय संक्रमित २२ हजार २१९ पुगे
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउने गरी मापदण्ड परिमार्जन →
काभ्रेको स्थापित सहकारी श्री मनकामना साकोसको सेवा केन्द्र अब पाँचखालमा पनि १८ आश्विन २०७७, आईतवार १४:१५
जिल्ला सहकारी संघ, काभ्रेले श्रावण २९ मा अभियानमुखी कार्यक्रम गर्दै १८ आश्विन २०७७, आईतवार १४:१५
सरकारले सोध्यो रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धकलाई स्पष्टीकरण* १८ आश्विन २०७७, आईतवार १४:१५
लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन १८ आश्विन २०७७, आईतवार १४:१५
कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन १८ आश्विन २०७७, आईतवार १४:१५
२४ घण्टामा देशभर ३३८३ संक्रमित थपिए, २४ को मृत्यु १८ आश्विन २०७७, आईतवार १४:१५
उपत्यकामा फेरि साउन २७ सम्म निषेधाज्ञा लम्बियो, के गर्न पाइन्छ के पाइँदैन ? (आदेशसहित) १८ आश्विन २०७७, आईतवार १४:१५